HeersareMuxumed: Waaya-arag Wehel Ka Dhigo!
Waxa jirta maahmaah tidhaahda; “Waarimaysid'e war ha kaa hadho.” Waa maahmaah xikmad mug-weyn xanbaarsan oo soo gudbinaysa in qofku u nool yahay in wax uun laga dhaxlo. Weliba si gaar ah waxay u caddaynaysaa in qofku taariikh iyo magac ka tago isla markaana looga baahan yahay inuu sameeyo horumar nololeed oo wax-ku-ool ah. Qof weliba-na wuu jecel yahay in marka ay tiisu timaado ee uu god-galo in wuxuun lagu xasuusto, laakiin waxa lagu kala duwan yahay hanka iyo hiigsashada. Qof wuxuu ku hammiyaa in laga dhaxlo taariikh, cilmi, aragti-nololeed iyo waaya-aragnimo sugan. Qofna wuxuu ku hammiyaa in hanti uu tabcay laga dhaxlo, halka qof kale aanay midna-ba talada ugu jirin.
Waxa marar badan kaa hor imanaya caqabado nololeed oo mid kastaa halisteeda leedahay. Inta uu qofku nool yahay wuxuu maraa maraaxil kala duwan oo mid kastaa waayaheeda leedahay. Wuxuu la kulmaa horumar, haliso iyo hagardaamooyin kala duwan. Wuxuu yaqaannaa hababka looga gudbo xilliyada adag, kuwo lagu gaadho badhaadhe, kuwa lagu fardaamiyo mashaqooyinka iyo waxyeelooyinka qarsoon. Wuxuu hore u tijaabiyey isku dayo guul-darro ku dhammaaday iyo kuwo uu ku badhaadhay-ba. Dhan kasta oo aad ka eegto qofka waaya-aragga ahi wuxuu ka biyo-keenay nolosha dhinacyadeeda kala duwan. Waa balli uu ka cabbi karo cidda u ooman wax-ka-barashada nolosha la tijaabiyey ee muddada soo jirtay.
Marka aynu leenahay waaya-arag wehel ka dhigo waxaynu u jeednaa wax ka baro, waxa aynu u jeednaa wixii wanaagsan ee wax tar leh ka baro, balse uma jeedno wax kasta ka baro. Waayo, qofka waaya-aragga ahi wax wanaagsan iyo wax aan wanaagsanayn ba wuu soo maray.
Ganunaanadku wuxuu yahay, sida aad wax badan u ogaado, si aad guul u gaadho, si ay garashaadu u kobocdo, si caqabado badan oo meerta nolosha ah uga badbaado, si aad ummadda wax ugu soo kordhiso, si aad adigu isu ogaado waa inaad hal-ku-dhig ka dhigataa; “waayo-arag wehel ka dhigo dii waxna ka baro.”
Posted by HeersareMuxumed at 4:46 AM